Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Mgbawa ugwu Japan na -awụpụ ntụ ntụ ruo na mbara igwe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbawa ugwu Japan na -awụpụ ntụ ntụ ruo na mbara igwe.
Japan nwere ihe karịrị ugwu mgbawa 100, ọrụ seismic na mpaghara ahụ dịkwa elu. Tọzdee gara aga, e guzobela mpaghara mwepụ ihe dị ka ọkara kilomita n'akụkụ Mount Aso mgbe obere mgbawa gbawara.
Ugwu Aso - ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ na Japan - gbawara n'ihe dịka elekere 11:48 nke ụtụtụ Wenezde.
Ndị ọrụ Japan na -adọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha zere iyi egwu nke iyi mmiri na -ada na oke okwute.
Onye nnọchite anya JMA dọrọ aka na ntị n'oge nnọkọ mgbasa ozi televishọn na gas na -egbu egbu nwekwara ike na -esi na ugwu mgbawa.
Ndị ọrụ Japan na -adọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara ịpụ n'Ugwu Aso, n'agwaetiti Kyushu nke dị na ndịda, ka ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ na Japan na -agbawa, na -agbapụta gas na ntụ dị kilomita ole na ole n'ime elu igwe.
Ndị uwe ojii mpaghara kwuru na onweghị akụkọ gbasara ọnwụ ma ọ bụ ndị mmadụ efu. Ha kwuru na mmadụ iri na isii ndị na -agbagharị ụkwụ bụ ndị nọrọ n'ugwu ahụ n'isi ụbọchị ahụ alọtala n'udo.
Dị ka Mlọ Ọrụ Japan Meteorological Agency, Ugwu Aso, ebe ndị njem nlegharị anya n'agwaetiti Kyushu nke dị na ndịda mba ahụ, tupuru ntụ ntụ 3.5km (2.2 kilomita) na Wenezde mgbe ọ gbawara n'ihe dịka elekere 11:43 nke ụtụtụ (02:43 GMT).
Agencylọ ọrụ meteorological setịpụrụ ọkwa njikere maka ndị nọ nso ugwu mgbawa 1,592 (5,222ft) ruo atọ n'ime ise n'ihe ọghọm ya. N'ihi ihe egwu nke nnukwu okwute na pyroclastic na -asọba n'ime 1km (0.6 kilomita) nke nnukwu ndagwurugwu Nakadake, a gwara ndị mmadụ ka ha ghara ịbịaru nso na mpaghara ahụ.
Onye isi odeakwụkwọ ụlọ ọrụ Hirokazu Matsuno kwuru, "Ndụ mmadụ bụ ihe kacha anyị mkpa, anyị na ndị ọrụ nchekwa onwe, ndị uwe ojii na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na -arụkọ ọrụ iji dozie ọnọdụ a."
Obodo kacha dị nso na Mt Aso bụ Aso, nke nwere ihe dị ka mmadụ 26,500.
Ugwu Aso nwere obere mgbawa na 2019, ebe oke mbibi ugwu kacha njọ na Japan n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 90 gburu mmadụ 63 n'Ugwu Ontake na Septemba 2014.
Japan bụ ebe ihe karịrị otu ugwu mgbawa 100 dị, ọrụ seismic na mpaghara ahụ dị elu. Tọzdee gara aga, e guzobela mpaghara mwepụ ihe dị ka ọkara kilomita n'akụkụ Mount Aso mgbe obere mgbawa gbawara.
N'akụkụ ugwu mgbawa ugwu, a na -enwekwa ala ọma jijiji na ya Japan, otu n'ime ebe kacha eme mkpọtụ na ụwa. Japan nwere ihe dị ka pasent 20 nke ala ọma jijiji ụwa nke ịdị ukwuu 6 ma ọ bụ karịa.